Cryptopay Debit Card ukubuyekeza - Bitcoin Ikhadi Ukuqhathanisa 2018
Cryptopay Debit Card ukubuyekeza
Cryptopay ukunikeza indlela elula ukuchitha bitcoins yakho emhlabeni wonke. Abasebenzisi ungazuza izinzuzo inethiwekhi bitcoin ngenkathi kusakaza lwemali izinguqulo futhi hedging ngokumelene kwemakethe. Ezihlinzekwa Cryptopay unikeza abasebenzisi ukufinyelela ngokushesha futhi zikhululekile Bitcoin izinkokhelo. Ikhadi Visa lasebhange akhishwe yiNkampani usibonisa nge bitcoin kufana ukuthi abantu abakwazi ukusebenzisa phezulu kwe-inthanethi noma ukuhoxa ATM.
Services enikeziwe Cryptopay
Abasebenzisi bangakwazi ukuthenga, ukuthengisa kanye bitcoins esitolo e Cryptopay sika bitcoin isikhwama ku-akhawunti flex. Ngemuva yokuxhuma i-akhawunti yasebhange ukuze yesikhulumi, abasebenzisi abakwazi ukuguqula EUR, GBP noma USD kufana ku bitcoins. Wesikhwama yakhelwe ngendlela ukuvumela amakhasimende ukugcina lwemali amanani ahlukahlukene ngaphakathi akhawunti efanayo. Lokhu kwenza ukuthumela nokwamukela imali phesheya eziningi isipiliyoni ngokunethezeka.
Cryptopay nezindaba Visa abadonsi amakhadi ukunikela amathuba okungaxhunyiwe ku-intanethi imali kulabo bitcoins oluphethe. Amakhadi avumelekile nhlobo POS ezikhumulweni lapho Visa amakhadi zamukelwa. Lokhu kusho amakhasimende noma ukhokhe ku-intanethi noma ngesikhathi izigidi abathengisi emhlabeni wonke. Ngaphandle Visa amakhadi yendabuko kufanele chips nezikhonkwane, abasebenzisi ingabuye inqume amakhadi virtual, okuyinto zamukelwa kabanzi njengoba amakhadi epulasitiki.
I-akhawunti ezilinganisweni kungenziwa isipikili up nebhange abavamile akhawunti Ukudluliselwa. Akhawunti asebhange abafanelekile ngaphakathi 28 SEPA emazweni aseYurophu, kodwa amakhadi kungenziwa yayala ngaphandle kwe yeYurobhu iba kakhulu. Okwamanje, amakhasimende e-United States noma India abakwazi oda ikhadi lasebhange esikhishwe Cryptopay. Ngaphandle-United States, inkampani akufaki i eyengeziwe 120 amazwe ukusuka lapho benza inkonzo yabo, kuhlanganise ambalwa amazwe ase-Afrika yaseMpumalanga Ephakathi.
Amakhadi Visa lasebhange ezithunyelwa omhlaba khulula uma isevisi ejwayelekile kuyakhethwa. Ngemva oda yenziwa ngokusebenzisa iwebhusayithi, ikhasimende uthola ikhadi lasebhange ngaphakathi 2-3 amasonto eYurophu nase 3-5 amasonto e lonke izwi. Uma kwenzeka we express ukulethwa inketho ikhethwa, amaklayenti bangathola amakhadi ngaphambilini ngaphakathi 3-10 izinsuku imali ngokweqile 75 USD.
amakhadi Plastic izindleko 15 USD, amakhadi virtual kukhona 2.5 USD. I amakhadi epulasitiki uvumele abasebenzisi abaqinisekisiwe ukuhoxisa nsuku zonke 2,000 USD kusuka ATM futhi kukhona 10,000 USD nomkhawulo ups olulodwa phezulu. Nokho zingeqedwe hhayi ukuhoxa Imininingwane, noma e top up amanani ku kulayishwa ibhalansi.
Cryptopay inikeza kungcono base umsebenzisi inketho basebenzise amasevisi ayo ngaphandle yokuqinisekisa kakhulu. Kuleso simo Nokho imikhawulo yama-ATM Ukuzihoxisa kanye topups kukhona kakhulu ezincane. abasebenzisi okungaqinisekisiwe angahoxisa 400 USD nsuku zonke kusuka ATM, kodwa kuphela isamba 1,000 USD lonke kuso sonke isikhathi sokusebenza ukufinyelela.
Ngoba kokubili abasebenzisi liqinisekisiwe futhi ezingaqinisekisiwe, amakhasimende ayakwazi ukuhoxisa ukheshi kusuka ATM izikhathi ezimbili kuphela ngosuku. Ngakolunye uhlangothi, kokubili uhlobo abasebenzisi zingasebenzisa Cryptopay debit card isikhathi angenamkhawulo kwe-inthanethi.
amacala Cryptopay 1% kuwo wonke ukuguqulwa bitcoin futhi ku Fiat zezimali. Indlela eshibhe iwukuba ukulayisha ibhalansi ye-akhawunti nge on-site Cryptopay ukulayisha ithuluzi, ngoba uma kungenjalo yesikhulumi umangalela i eyengeziwe 0.99% ngokusebenzisa izinsiza-third-party. Ukuze athula amakhadi kukhona imali esingeziwe $ / € / £ 0.10 eceleni 1% ukushaja.
Abasebenzisi kufanele sinake lwemali oluyisisekelo ekhadini Cryptopay njengoba kukhona ezengeziwe 3% ukushaja ku ukuthengiselana angaphandle. Uma amakhasimende ufuna ukukhokha noma ukuhoxisa imali esihlukile kuka lwemali phansi ikhadi le 3% imali yokuhweba angaphandle likhokhelwa.
Imali ye-ATM Ukuzihoxisa ngemisebenzi ezifuywayo international euro kukhona € efanayo 2.25. Nokho uma base lwemali ikhadi Cryptopay ihlukile kune lokho ATM inikeza, kukhona imali ephakeme ngemisebenzi wezizwe owawuseNew GBP and USD.
Amanani bitcoin kungukuthi adayiswa e-premium kakhulu kanye ibhidi / sipho wekhasi kunengqondo. Ngokwesibonelo, Cryptopay bitcoins ahlinzekwa 775.84 - 783.49 USD ibhidi-cela, ngenkathi intengo BTCUSD kwaba 785.94 ngesikhathi Coinbase futhi 779.67 ngesikhathi Bitstamp.
Kunezindlela eziningana nezimali ezisebenzayo sisebenzisa futhi yokulayisha Cryptopay debit card.
Cryptopay Plastic Ikhadi esikhokhelwa – Inani kanye Izimali
Intengo Card kanye nezimali
intengo Card € 15.00 £ 15.00 $15.00
Standard ukulethwa emhlabeni wonke Mahhala Mahhala Mahhala
Veza ukulethwa emhlabeni wonke € 70,00 £ 50.00 $75.00
Domestic ATM Okwenziwayo € 2.25 £ 1.75 $2.50
International ATM Okwenziwayo € 2.75 £ 2.25 $3.50
imali yokuhweba Foreign 3% 3% 3%
Imali yesevisi ekhokhelwayo ngenyanga € 1.00 £ 1.00 $1.00
Iyalayisha imali 1% 1% 1%
Third-party Imali ukulayisha 1.99% 1.99% 1.99%
Cryptopay virtual card esikhokhelwa – Inani kanye Izimali
intengo Card € 2.50 £ 2.50 $2.50
Okwenziwayo Foreign Imali 3% 3% 3%
iwebhusayithi Cryptopay sika has umbhalo wekugcina lolungiswe emaphutsa, esihlanganisiwe blue ukubukeka. I lokuhamba eziqondile kusayithi.
Ukubhalisa kuthatha ngomzuzu owodwa kuphela. Ngemuva kokunikeza igama, ikheli le-imeyili kanye nephasiwedi, abasebenzisi Ungangena ngemvume ku-yesikhulumi. Ukuze uqinisekise abasebenzisi akhawunti Kumelwe nilethe ekhishwe uhulumeni ikhadi le-ID (ipasipoti, Likazwelonke le-ID noma ilayisense yokushayela) kanye nobufakazi yokuhlala. Ukuze ubufakazi yokuhlala isitatimende sasebhange, yesikweletu, intela ukubuya noma ekhishwe uhulumeni isitifiketi yokuhlala samukelwa. Ukuqinisekiswa kwe kuthatha amahora ambalwa nje.
Ngemva ngemvume, abasebenzisi bangabuka ibhalansi akhawunti. lwemali ngamunye (EUR / GBP / USD) unikezwa ahlukene ikheli bitcoin lapho amakhasimende angakwazi ukulayisha ezilinganisweni bitcoin. Kukhona kwamathebhu ahlukene ngokudlulisela imali Bitcoin amakheli, loading futhi athula amakhadi. Ezilinganisweni kungenziwa kuhoxiswe komunye isikhwama bitcoin noma exhumene akhawunti asebhange ngaphansi Thumela kwesigaba. Ukudluliselwa ithebhu let le abasebenzisi umeme abangani kusevisi ukuze uthole 10% Isabelo sezimali se kuyilapho abangane bangasebenzisa Cryptopay lasebhange ukuze 25% Isaphulelo.
Uma noma imuphi umbuzo kuphakama, kukhona umsebenzi search esigabeni-FAQ. Cryptopay inikeza bukhoma ukwesekwa wengxoxo uma noma yiziphi izinkinga azinakuxazululwa nge-imeyili.
Abasebenzisi kubonakala uthanda Cryptopay kakhulu. Zidumisa umbono ibhizinisi kanye website. Ngempendulo ezimbi ezishiwoyo kwaba ukuthi imisebenzi nokwesekwa kwamakhasimende e-UK umkhawulo wesikhathi kuphela kungaba ikhanda amaklayenti kwezilwandle.
Unverified / eliqinisekisiwe €1,000.00 / Unlimited £800.00 / Unlimited $1,000.00 / Unlimited
imithwalo third-party etholakalayo
Unverified / eliqinisekisiwe Ayikho / Yebo Ayikho / Yebo Ayikho / Yebo
Max olulodwa phezulu Inani
Unverified / eliqinisekisiwe €1,000.00 / € 10,000.00 £800.00 / £ 8,000.00 $1,000.00 / $10,000.00
Max kwenze nomthwalo wansuku zonke
Unverified / eliqinisekisiwe €1,000.00 / € 20,000.00 £800.00 / £ 16,000.00 $1,000.00 / $20,000.00
Max esaphila umthwalo
Max esaphila ethula
Unverified / eliqinisekisiwe 2 / Unlimited 2 / Unlimited 2 / Unlimited
Cryptopay.me iye eyasungulwa ngo-October 2013 nge bitcoin amabili amajuba nomdlandla. George Basiladze ine MSC ngezimali, ubenamanxeba amaningi umhlaziyi zocwaningo nganoma Russian amafemu utshalomali nge ngokujulile ulwazi amasistimu wezezimali. Dmitry Gunyashov has a 7+ iminyaka umlando ekwakheni amabhizinisi e-commerce futhi ngempumelelo ephethwe umsebenzi nokuthuthukiswa kwezinhlelo yokukhokha amaningi esikhathini esidlule. headquarter yenkampani lisuselwe London, guys ukulawula ibhizinisi kusukela UK kulezizinsuku. Le nkampani ikhiphe ezingaphezu kuka kakade 37,000 I-debit card, banayo 167,000 abasebenzayo izwi okubanzi abaqhuba 100,000 ukuthengiselana ngenyanga namasevisi Cryptopay sika.
Inzuzo enkulu Cryptopay ngukutsi ngamasevisi ezintathu ezinkulu zezimali EUR, GBP and USD futhi lokuthumela le Visa ikhadi khulula emhlabeni wonke. Iwebhusayithi yakhiwe yakhelwe kahle. Nokho ngoba schedule amanani kancane ngaphezu isilinganiso kuqhathaniswa izimbangi, abasebenzisi kufanele ucabange ngokuthi bazosebenzisa zonke izinhlobo zemali ezintathu futhi kungaba kuwufanele ukwenza kanjalo nge Cryptopay.